တီဗီနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ - iHome ► Shopping Time
မူလသို > လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ>ဖျော်ဖြေရေးဆိုင်ရာ>LED တီဗီ နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်း
ကုန်ပစ္စည်း 55 ခု ရှိပါသည်
Sony ( DVP-SR370 ) DVD Player
DVD Player HDMI DVD DP 132H( DVD HDMI)
Philips အမှတ်တံဆိပ် DVD Player ( Model No.DVP - 3670 ) 1. စစ်မှန်တဲ့ ရုပ်ပုံလွှာနင့် အရည်အတွေးကောင်းမွန်သည့် စက်ဖြစ်ခြင်း။ 2. ရုပ်ရှင် နင့် ဂီတ ဖျော်ဖြေရေးအတွက်လည်း အထူးကောင်းမွန်ခြင်း။ 3. Internet မှ့Divx ကုဒ်သွင်းဗီဒီယိုများနင့် ရုပ်ရှင်များခံစားနိင်ခြင်း။ 4. USB နဲ့ လည်းတွဲသုံးနိင်ပါသည်။
Blu-ray DVD Player Blu-ray DVD BP 250 BD Player
Sony ( BDP-S1500 ) Blu-ray Disc Player
Sony ( BDP-S5500 ) 3D Blu-ray Disc Player
Mosquito away LED
LG အမှတ်တံဆိပ် Mosquito away LED32" LED, , T2 (32LH520D)
4K upscaled 3D Blu-ray Disc...
Sony ( BDP-S6700 ) 4K upscaled 3D Blu-ray Disc Player
LG အမှတ်တံဆိပ် Mosquito Away LED ( 43 " ) 43LH520T